Arsen Wenger Ayaa Shaaca ka qaaday Inuu Dalab Kale Ka gudbin dono Lemar
Sunday, May 27th, 2018 - 12:26:57
Sunday September 03, 2017 - 13:43:09 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Arsene Wenger ayaa xaqiijiyay in Arsenal ay dib ugu soo laaban doonto doonistii xiddiga Monaco ee Thomas Lemar ka dib markii ay ku guuldareesteen inay soo wareegaan xagaagaan.
Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Premier League ay 100 milyan euro ku dalbatay Thomas Lemar, lakiin waxa uu doonayaa inuu dalab labaad u diro ciyaaryahanka khadka dhexe.
Wenger ayaa doonaya inuu 21 jirkaan uu keeno Premier League, iyadoo Alexis Sanchez uu isha ku hayo inuu ku biiro Manchester City. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka Lemar ayaa diiday inuu fursad u helo inuu ku biiro kooxda Gunners, inkastoo labada dhinac ay burburiyeen.
Inkastoo xiddiga reer France uu doortay Monaco ka hor Arsenal, Wenger ayaa shaaca ka qaaday inuu sii wadi doono raadinta ciyaaryahanka khadka dhexe, islamarkaana uu dalab kale ka gudbin mustaqbalka dhow.